Nzira yekugadzira Zvakawanda B2B Zvinotungamira Nezviri mukati | Martech Zone
Chief Marketing Officer (CMO) Kanzuru yakatanga chirongwa che chidzidzo chitsva chakanangana nekuti kushambadzira kunogona sei kuburitsa zvinobudirira kutungamira kunotungamira kuburikidza nekumanikidza kwekufunga kwehutungamiriri zvemukati - basa rakaratidza kuve kurwira kwevatengesi nhasi. Saizvozvo, chete 12% yevatengesi vanotenda kuti vane epamusoro-mashandiro emukati ekushambadzira enjini ayo akarongwa zvine hungwaru kunongedza vateereri chaivo nezvakakodzera uye zvinonyengetedza.
Kukundikana kwepamusoro kunokanganisa huwandu hwekurodha pasi kana kunyoresa zvinosanganisira:
48% yevatengesi haisi kusimukira zvakagadziriswa zvemukati zvevateereri vateereri.
48% yevatengesi vari kusapa mari yakakwana kugadzira zvine chekuita uye zvine chiremera zvemukati.
44% yevatengesi vari kwete kuburitsa zvemukati zvinoenderana kana zvinoreva kune vateereri vakasiyana.
43% yevatengesi vari kugadzira zvemukati izvo kusasvika kune vanoita sarudzo chaidzo kuyambuka sangano.
39% yevatengesi vari kwete kushandisa nzira dzakakodzera dzekuparadzira uye mikana yekubatanidza yekuwedzera kusvika.
B2B Kutungamira Chizvarwa nezviri mukati Zvinoda izvi Zvakanakisa Maitiro
Shandisa zvinobatika kugovana zvemukati uye syndication maitiro.
Govera zvirimo kune iripo dhatabhesi uye yechitatu-bato zviwanikwa.
Gadzira inotungamira yekukurudzira zvemukati.
Tailor zvemukati kunongedza vateereri.
Gadzira kubatana kuzere pakati kushambadzira nekutengesa.
Kudzidza, Tungamira Kuyerera Kunobatsira Iwe Kukura, inowana makambani mazhinji achishaya kubvumirana pane izvo zvinoumba chaiyo yekutengesa inotungamira. Ivo zvakare havasi kubatana zvinobudirira nekutengesa uye mabhizinesi ekuvandudza mabhizimusi kuti vagadzire kuenderana pane zvinoda kugadzirwa nzira, madingindira uye ekukurudzira ajenda.
Chirevo chinoratidza zvakawanikwa kubva kuongororo yevatengesi vepamusoro pamatanho akasiyana siyana maindasitiri, kuwedzera kubvunzurudzwa nevatungamiriri vekutengesa kuIBM, SAP, Thermo Fisher Scientific, OpenText, CA Technologies uye Informatica. Tsvagiridzo inopa yakadzika, yakatenderedzwa maonero pamusoro pekuti marongero ekushambadzira zvemukati ari kutarisirwa sei, kuita kwemukati kuri kuyerwa sei, uye kune izvo zviyero zvemukati zvakaiswa mukati, zvinokurudzirwa uye zvakabatanidzwa kuti zvigadzire zvakakwana kutungamira kuyerera.
Tags: b2bb2b zvemukati zvekushambadzirab2b kutungamira chizvarwab2b inotungamira kukurab2b nzira dzekutungamirab2b inotungamiracmocmo kanzuru
Chinyorwa chakanyatsojeka. Ndingafarire kuverenga zvimwe zvakafanana zvinyorwa. Ndatenda
Douglas, anofara kwazvo kuwana yako blog uye zvishandiso uye kubatsirwa nazvo zvese. Yakagadzirirwa zvemukati, zvinangwa zvevateereri, B2B inotungamira, zvese izvi zvakanaka uye zvinoda pfungwa. Ndeupi maonero ako nezve kuburitsa mashandiro aya kumakambani anotungamira eB2B anotora tarisiro yavo yekushandisa zviri pamusoro kuita mushandirapamwe mukuru? Ndiri kutarisa kune callbox, bant.io uye leadgenius. Ndinokutendai nerubatsiro rwenyu.
Mhoro John! Iyi ingave hurukuro huru kune yedu MarTech nharaunda - ndokumbira ubatanidze uye uzvitumire!
Ndakafarira kutsvagurudza kwakapinda mune ino positi. Kubudirira pakushambadzira zvemukati kwakanyanya kuomarara kupfuura vatengesi vazhinji vanotarisira- kunyanya mukati memabhizimusi madiki ane bhajeti shoma, masimba, uye hunyanzvi.